Etu ị ga - esi mepụta vidiyo Krismas gị n'efu | Gam akporosis
Etu ị ga - esi mepụta vidiyo Krismas nke gị iji kelee ụbọchị ezumike ndị a n'ụzọ dị iche
Oge ezumike ekeresimesi na-abiarukwu nso, nke a mere m jiri kpebie taa imepụta post a nke m ga-egosi gị otu esi ike gị onwe gị Christmas video ikele ke a dị iche iche ụzọ na, nnọọ, nnọọ mbụ ndị a pụrụ iche ọzọ.
Ngwa m ga-akwado gị taa ga - eke a funny Christmas video kpamkpam free na nke, anyị ga-enwe ike itinye ihu nke ndị anyị chọrọ, nke a ga-etinye na vidiyo n'onwe ya, dochie ihu nke aka ya ise a na-agba elves ndị ga-eji abụ na a na-agba egwu pụrụ iche ụbọchị ezumike nke anyi choro ndi ozo site na iji igwefoto anyi ma obu ichota ihe obula site na gallery nke ngwa anyi.
Enwere ike ibudata ngwa a site na Storelọ Ahịa Google Play n'okpuru aha Onwe gi site na Office Depot, ụlọ ọrụ gọọmentị ngwa ngwa maka gam akporo, n'efu n'agbanyeghị na nhọrọ nhọrọ dị egwu nke ịzụrụ ihe mgbakwunye na ngwa ngwa; M na-ekwu nhọrọ dị ize ndụ nke ịzụrụ ihe n'ime ngwa ka ị attaa ntị, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na-ahapụkarị ụmụ anyị ọnụ, nke ga-enwerịrị ngwa Storelọ Ahịa Storelọ Ahịa maka ịhazi nke ọma okwuntughe nchebe iji gosi ma obu nye ikike ikwu ugwo obula.
Kedu ka ị ga - esi hụ na vidiyo a tinye na nkụnye eji isi mee nke post a Ndị editọ Androidsis na-eme agba egwu pụrụ iche iji kelee ha na ezumike ekeresimesi, na-eke a Christmas video na ngwa a bụ ya mere na dị mfe nke na ọbụna ndị kasị nta n'ụlọ ga-enwe ike ime ka ha onwe ha video ekele Christmas enweghị isi nsogbu na dị ka ọ bụ egwuregwu.
1 Etu ị ga - esi jiri ElfYourself site na Depot Office mepụta vidiyo nke gị ekeresimesi
2 Budata ElfYourself site na Office Depot n'efu na Playlọ Ahịa Google
Etu ị ga - esi jiri ElfYourself site na Depot Office mepụta vidiyo nke gị ekeresimesi
Na video m kọwaa otú mfe nke ElfYourself site na Office Depot iji mepụta vidiyo Krismas gị nke iji kelee ndi niile a hụrụ n'anya, ma ha bu ndi ezinulo gi ma obu ndi enyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu ị ga - esi mepụta vidiyo Krismas nke gị iji kelee ụbọchị ezumike ndị a n'ụzọ dị iche
Google apụtaghị na Hangouts ga-ewepụ ike izipu ma nata ozi SMS na ozi MMS
Etu esi egwu MEMES si gam akporo